Oge ime, ịmụ nwa | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Pregnancy, Childbirth
Ndị mmadụ na-emepụta ihe na-eme ka ndị mmadụ na-aga n'ihu, ugbu a n'ụlọ ọgwụ ndị na-enyere ụmụaka aka, e nyere ha ọgwụ na VIKASOL. Nke a ọ bụ usoro iwu chọrọ ma ọ bụ nkwenye nke nne?
Ndị mmadụ na-emepụta ihe na-eme ka ndị mmadụ na-aga n'ihu, ugbu a n'ụlọ ọgwụ ndị na-enyere ụmụaka aka, e nyere ha ọgwụ na VIKASOL. Nke a ọ bụ usoro iwu chọrọ ma ọ bụ nkwenye nke nne? Dee akwukwo edere tupu oge eruo. Na nke a bụ maka ndị na-ewere onwe ha ndị kasị ...
2 na 1 Kajtex Tramonto 14 flax. Kedu onye nwere stroller?
2 na 1 Kajtex Tramonto 14 flax. Kedu onye nwere stroller? ọ dịghị adaba maka kazyrk na-agbapụta Onyenwe anyị, bụ stroller nke kapeeti si mgbidi ma ọ bụ si n'obí? !!! ọ masịrị m ya ma! sooo iru ala ...
Kedu otu esi eme ka a mụọ nwa n'ụlọ ọgwụ? Kedu ihe bụ ọka ahụ?
Kedu ka esi ebute ịmụ nwa n’ụlọ ọgwụ? Kedụ ihe mgbada ahụ? N’ime mkpali ịmụ nwa, otu ihe dịkarịsịrị obere bụ na ahụ adịbeghị njikere maka ịmụ nwa. Site na cervix kpaliri m, ụfọdụ webatara n’ime akpanwa maka otu ụbọchị…
Nchịkọta ọnụọgụ-ihe dị n'ime ya.
Nchịkọta ọnụọgụ-ihe dị n'ime ya. mfe ma dị ọnụ ala karịa ịzụta ihe eji eme ihe na ahịa ọgwụ. Na ngwugwu a, enwere ike ịme ka ọkpụkpụ gynecological na-ekpuchi ekpuchi, akpụkpọ ụkwụ, mkpuchi, wdg.
Ego ole ka ị chọrọ ka ndị ekpenta, ihe mgbakwasa na ihe ọ bụla ọzọ iji kwadebe nwa ọhụrụ?
Ego ole ka ị chọrọ ka ndị ekpenta, ihe mgbakwasa na ihe ọ bụla ọzọ iji kwadebe nwa ọhụrụ? A naghị agba anyị aka, ndị na-ede akwụkwọ ahụ bụ ọkụ 10-12 na 5 dị mkpa, ọ dị oke mma. Ndị na-eji ejiji na ndị na-agba ákwà mkpa ọ dịkarịa ala 5 ...
Kedu ka ị si ahọrọ bat maka nwa amụrụ ọhụrụ? site na nhazi ndị dị aṅaa?
Kedu ka ị si ahọrọ bat maka nwa amụrụ ọhụrụ? site na nhazi ndị dị aṅaa? Ọ bụghị maka ihe. Tupu ọnwa 2, anyị na-asacha ụlọ akwụkwọ ahụ na bat na-emekarị, na mgbe anyị gwasịrị slide, anyị na-etinye slide ahụ na bath, anyị na-anọdụ ala ...
Ndi onye ọ bụla mụrụ izu 25-27? Ma ọ bụ ma eleghị anya enwere ndị enyi dị otú ahụ?
O nweela onye mụrụ nwa na izu 25-27? ma ọ bụ na enwere ụdị ndị enyị a? ndị maara ya nwere ikpe a n'oge ọkọchị, ọ bụ naanị na ọbara ọgbụgba mepere ma m ga-eme cesarean, amụrụ nwata ahụ na ekele ya gakwuru Chukwu ...
Ezigbo nwanyi, gwa m, Ego ole ka duphaston na-eri na ngwo ogwu, otu esi eji ya, gini bu ihe si na ya?
Womenmụ nwanyị mara mma, gwa m, Ego ole bụ duphon, ole kwa mbadamba ọ bụla, etu esi ewe,? O buru na ebumnuche gi bu imu nwa ma diri ya - mmadu gha a drinku. ma ọ bụrụ na ebumnuche bụ ọnụ ọgụgụ, wdg, a drinkụ. 450 p.…
prikorm. anụ ole ka ọnwa ole? Kedu anụ mbụ, anụ ezi, ọkụkọ? efere mgbe i nwere ike inye?
prikorm. anụ ole ka ọnwa ole? Kedu anụ mbụ, anụ ezi, ọkụkọ? efere mgbe i nwere ike inye? oburu na enweghi ihe ogwu aru, i nwere ike inye anu ogwu anu aru (Chicken or beef) maka okara nke afo, na nke mbu obere ...
Ovulation n'oge omimi ????
Ovu n’ime oge obara ???? N'izu Ovu, okpomọkụ ya na-adakarị. Temperaturedị ahụike dị elu nwere ike ịbụ maka ihe dị iche iche - nke a bụ ụkọ homonụ na mpaghara nke mbụ, yana mbufụt, yana ikekwe ọ bụ nke gị ...
Enwere m ike rie nneka osikapa nne ??
Enwere m ike iri osikapa ara mama ??? Can nwere ike ...))) ... O juru m anya na ndị mammies - ị nwere ike iri ihe niile, naanị iwebata ngwaahịa ọhụrụ - eri ọtụtụ ihe ma lee mmeghachi omume nwatakịrị ahụ - ọ bụrụ na stool ahụ bụ ihe nkịtị na enweghị mmeghachi ahụ nfụkasị, mgbe ahụ ...
Ogologo oge ole ka ị gara gynecologist maka oge mbụ? Ma olee otu 1 nke nnyefe a?
Ogologo oge ole ka ị gara gynecologist maka oge mbụ? Ma olee otu 1 nke nnyefe a? na 10 izu. nweta kaadị kaadi. n'ebe ahụ ha dee ihe niile Ama banyere gị ...
Ọ ga-ekwe omume ịfụkọta n'oge ime afọ ????
Ọ ga-ekwe omume ịfụkọta n'oge ime afọ ???? Ejiri m aka na aka (macrame), a mụrụ ụmụ nwanyị abụọ, mara mma ma dị mma, nke m chọrọ ka ị bụrụ. Na banyere ihe, gbanwee àgwà gị ...
Ole ndị n'ime ndị nne na nna n'ọdịnihu ga-ewere Duphaston? Gịnị kpatara ya?
Kedu nke nne ga - eme n'ọdịnihu lụtara Duphaston? Kedu ihe kpatara eji ede ya? Jụọ na www.babyplan.ru - saịtị dị mma. Duphaston bụ ọgwụ ọgwụgwọ homonụ nke ejiri rụọ ọrụ iji dozie ọnọdụ ọrịa dị iche iche metụtara ụkọ progesterone. ...
Enwere ike iji ule ime nwa maka ime nsọ nwanyị.
Enwere ike iji ule ime nwa maka ime nsọ nwanyị. Enwere ike ime ule a mgbe ị na-ekpe ekpere. O doro anya na ọ gaghị efu ya, ebe ọ na-emetụta hormone hCG. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-atụ anya ...
Ogologo oge ole ka ị na-eme ime ??
Ogologo oge ole ka ị na-eme ime ?? Ana m aṅụ ọgwụ mgbochi, ka m nwee ike ime ime. Mgbe m kwụsịrị ịṅụ mmanya, m tụrụ ime site na 2. Nke a bụ kpam kpam onye ọ bụla. dịka m ...
onye mere ime ahụ ike ???? ole ole ka emeworo, oleekwa otú ị na-eche mgbe ọ?
onye mere ime ahụ ike ???? ole ole ka emeworo, oleekwa otú ị na-eche mgbe ọ? M ghọtara na ajụjụ ahụ gbasara ihe ọzọ. Ma, ị nwere ike ịme ihe n'ụzọ ụfọdụ ma ọ bụrụ na ị na-ete ime? Ihe ndị na-esi na ya pụta ga-agwọ, na ...
Enwere ike ịmụ nwa na-amalite na 29 izu ma nwa ahụ ga-alanarị ????
ịmụ nwa ga - ebido n’ime izu 29, nwata ahụ ọ̀ ga - alanarị ???? Obi adighi m ike na amuru nwa nwanyi a na 30 (((((. Ma obu inwere ike imehie isi m nwere nwa amuru…
Gini bu ultrasound na aru oru? Pelvic ultrasound
Gini bu ultrasound na aru oru? Ultrasound nke akụkụ pelvic Nke a bụ nyocha nke ultrasound nke akụkụ pelvic ọtụtụ oge na obere oge. Ultrasound nke akụkụ pelvic nke nwanyị na-enyocha akpanwa, ...
Ini ewe ke nsị nsị n'ime ndị ime ime malitere? Ini ewe ke nsị nsị n'ime ndị ime ime malitere?
Ini ewe ke nsị nsị n'ime ndị ime ime malitere? Ini ewe ke nsị nsị n'ime ndị ime ime malitere? Ozugbo oge igbu oge, ma eleghị anya, obere oge gara aga, enweghị m ọkara mbụ Toxicosis nke mbụ ọkara CAN ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,351.